HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirSoyer oo ku siinaysa 100 darawaliinta baska ee ESHOT
02 / 06 / 2019 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Soyer wuxuu amar ku siiyay haweenka ku sugan İzmir
Degmada Metropolitan Municipality waxay isku diyaarineysaa isbeddel cusub oo lagu sameeyo gaadiidka dadweynaha. Socdaalka ESHOT ee madaxweynaha Tunc Soyer, darawalka baska ee gawaarida haweeneyda ayaa lagu amray in lagu helo tilmaamaha. Degmada magaaladu waxay raadineysaa darawal dumarka 100 leh xaaladaha lagama maarmaanka ah.
Degmada Badhasaabka Gobolka İzmir Dumarka Tunc Soyer ayaa ku daray mid cusub mashaariicda gaadiidka. Soyer ayaa la kulmay shaqaalaha markii uu booqasho ku tagay Agaasimaha Guud ee ESHOT todobaadyadii la soo dhaafay, waxaana uu sheegay in kaliya gaabiska ESHOT ay tahay darawal haween ah oo si guul leh u fuliyay hawl adag. Xaqiiqda ah in joogitaanka haweenku ay ku jiraan gaadiidka dadwaynaha ayaa si wanaagsan uga tarjumi doona xiriirka lala yeesho muwaadinka, tilmaamaha Madaxweyne Soyer ayaa hadda la fulinayaa. Agaasimaha Guud ee ESHOT wuxuu codsaday ISKUR inuu u shaqaaleeyo darawal haweenka 100 iyada oo shuruudaha lagama maarmaanka u ah shirkada degmada IZELMAN.
In website Turkey Authority ee Business (: www.iskur.gov.trSida ku cad shaacinta shaqooyinka la daabacay ee 40 ee aan helin maalinta, ugu yaraan qalanjabiyeyaal dugsi hoose, ama liisan darawalnimo ee E-fasalka ka hor intaan 2016 la qiimeyn. Mudnaanta waxay noqon doontaa kuwa haysta ugu yaraan sannadka 1 khibrad.
Intaa waxaa dheer, musharixiinta si guul leh u dhammeystiray Barnaamijka Tababarada Shaqada ee ISKUR waxaa loo adeegsan doonaa musharrixiinta aan lahayn khibrad 1 ah.
1 wuxuu bilaabi doonaa Juun, 11na waa la dhammeystiri doonaa Juun, waxaana lagu sameyn karaa oo kaliya adigoo e-mail ah (staff@izelman.com.tr).
3 dalbashada tigidhka korontada ee ESHOT
Wakhtiga Darawalka Haweenka ee Izmir
Boqolleyda Shaqaalaha Ka shaqeeya Xerooyinka Magaalada Istanbul 28 Zam